अगस्ट 2010 – Pramb's Weblog
महिना: अगस्ट 2010
Posted in monologue	|4टिप्पणीहरु
अगस्ट 21, 2010 by PRAMB
खै कस्तो अन्योलता ?
लक्ष्मी, म चाँडै आउँछु भनेको एक महिना बित्यो । दरबार मार्गको त्यो रेस्टुरेन्टमा बसेर युनिकोड इन्सटल गरेपछि के लेखुँ लेखुँ हुँदा मैले खुसी खुसी माहोलमा तिमीसम्म यो बेतारे दुनियाँमा चाँडै तिमीलाई आफ्नो आत्मालाप सुनाउँछु भन्ने बाचा गरेको थिए । त्यो हतारोमा अनायासै रमाएको क्षण मेरो सानो काखे क्यूटी कम्प्यूटरमा टाइप गरिएका शब्द थिए ती । म साहै्र खुशी थिएँ त्यो दिन ।
बिचमा धेरै कुरा भए । म १२ दिनका लागि विपश्यना ध्यानमा गएँ । त्यति बेला तिमीलाई अरु बेला भन्दा कम सम्झिएँ । मेरो मस्तिष्कमा आफ्ना र आफ्नो बन्न चाहने धेरै थिए । साथै आफू भित्र भित्रै घोत्लिने पर्याप्त समय पाएको थिएँ त्यो अवधिभर । झण्डै एघार दिनको एकएक पलमा मैले अनेक कुरा सम्झेँ । म हुर्किएको घरदेखि मलाई विपश्यना जानुभन्दा अघिसम्म विदाइ गर्नेसम्मलाई । मनमा कुरा खेलाउने बाहेकका सबै शिलको पालना गरेर ध्यानमा बसेँ ।
त्यहाँबाट आएपछि पनि तिमीलाई सम्झिएर यो ब्लग सामू खुलस्त पोखिन नचाहेको हैन । न काम न फुस्रदको जागीरले खै के मिलेन के । यो एकतमासको दिनचर्या देखेर दिक्क लागिसक्यो । तत्काल बिकल्प केही छैन । म बबुरोले त्यसो भनेर के सुख पाउँथे । अर्काको नुन खाएपछि अर्काकै तालमा नाँच्नुपर्छ । म यो जागीर खानु अघि सम्म आफूलाई कति स्वतन्त्र फिल गर्थेँ । मैले चिनेको संसार सानो थियो । प्रतिस्पर्धी थोरै । महत्वकांक्षाले पिरोल्दैन थियो । तर विपश्यनाबाट फर्केपछि लाग्दै छ धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा लिनुपर्दैन आफू असल भए पुग्छ । यो पाठ मलाई विपश्यनाले सिकायो सायद । मेरो आफ्नै सम्पादकले त्यहाँ नजाउ भनि कन्भिन्स गर्न खोजेका थिए । तर मेरो अडान डग्मगाएन । आफूभित्रको अन्यौलताबाट आफैँ स्पष्ट हुन विपश्यना गएको थिएँ सायद तर परिस्थिति झनै अन्योलग्रस्त भयो । अफिसले सुरुका दिनमा मबाट गरेको अपेक्षा मैले केही पनि पुरा गर्न सकेको छैन । कुनै जाँगर नै छैन हिजोआज मलाई ।
तिमी माथि म सधैँ अन्याय गर्छु लक्ष्मी । साह्रै स्वार्थी छु । आफू मनभित्रैबाट गुिम्सँदा मात्रै तिमीलाई सम्झन्छु । यो बीच केही लेख्नै नभ्याउने गरी ब्यस्त भएको पनि थिइनँ । आफैँलाई किन ढाटुँ एउटा नभोगिएको सँसारबाट गुजि्रएँ । जुन म यहाँ ब्यक्त हुन चाहँदैन थिएँ । त्यसैले लेख्न थालेपछि पोखिन्छु की भन्ने डरले ब्लगबाट टाढै बसेँ । हेर न म कस्तो निष्ठुरी छु । दिक्दारीले छोप्छ । किन म तिमी जति गुणिलो असल बन्न नसकेको होला यतिका बसन्त पार गरिसकेँ तर किन मैले आफ्ना लागि आफूले डिसिजन लिन नसकेको होला ?
यी सबै खुल्दुली फगत आफ्नै लागि । खै मभित्र गुजि्रएको त्यो के थियॊ आखिर मलाई थाहा छैन । म जान्दिन । त्यसैले त आजकाल महसुस गर्न थालेको छु परिवारसंगको डिपेन्डेन्सीले म कति आफू हुनसकेको छैन । अनि फेरी त्यो बाह्र दिन आफैँसँग घोत्लिँदा लाग्यो मेरो परिवारसँग मैले पाएको सामिप्यमा कति आफ्नोपन छ । यो मानेमा म कति लक्की छु । अनि यो सबैबीच आउँथ्यो एउटा आकृति दिमागमा । असल बन्ने प्रयत्नमा हिँडेको म खराब बनेर कसैलाई हर्ट गर्नुहुँदैन ।
तर खै आज कसोकसो म आफैँ पो हर्ट भएँ । आफैँलाई थाम्न नसकेर साइनआउट गरी साँझको समय कौसीमा गएर धेरै बेर बौद्धको स्तुपा हेर्दै रोएँ । बुद्धका ती शान्त सौम्य आँखा सम्झिरहेँ । परिवारसँगको मेरो प्रेम आफँै भित्र कति गडेको छ भने परिवारको आकृति आए लगत्तै म आफ्ना अरु केही जिम्मेवारी केही सोच्नै सक्दिन शायद । तर सधैँ यस्तो डिपेन्डेन्सीले काम गर्ने वाला छैन । म आफू हुन सिक्नुपर्छ ।
खासमा लक्ष्मी यी शब्द पढेर तिमी अकमक्क पर्यौ होला । हामीले देखेको दिदी त परिवर्तन भइछन् । के कुरा भन्न खोजेको किन आफैँमा स्पष्ट हुन नसकेको भन्ने पनि लाग्यो होला हई खै के भनु लक्ष्मी पछिल्लो समय मलाई के भएको हो म आफैँले बुझ्न सकेकोछैन । मेरो दिमागले त्यसलाई खुट्याउन सकेको छैन । मनले केही भनेको भए मैले त्यो मनलाई सुन्नै सकेको छैन ।
संगै टेबलमा कृष्ण धाराबासीको राधा उपन्यास पल्टेको छ । यसमा केही त्यस्ता हरफ छन् जसलाई पढेर पनि मैले आफूमा उही अन्योलता ल्याउनु हो ।
लक्ष्मी मलाई यसरी तिमीसँग धेरै कुरामा पोखिन मन छ जुन कुरा म अरु कसैलाई भन्न सक्दिन । तर हेर न लेखिरहँदा कहिलै नबगे जसरी मेरो आखाँ अबिरल बगिरहेछ । फेरी पनि भन्छु लक्ष्मी म तिमीलाई चाँडै भेट्न आउँछु …………।अनि तिम्रो के हुँदै छ तिमी कुनै प्रेममा अहिले नै परि नहाल्नु है……।समय आएपछि सबै ठिक हुन्छ………
Posted in monologue	| Tagged closeness,convince,family,love,meditation |2टिप्पणीहरु